Shiinaha Agaro oligosaccharide warshad iyo soosaarayaasha | HQG
Fujian Global Ocean Biotechnology Agaro-oligosaccharide waxay leedahay waxqabadyo gaar ah oo bayooloji ah, sida anti-qayilo, anti-bararka, anti-viruska iyo kahortagga colitis, iwm. Alaabada waxaa soo saaray oo lagu farsameeyay farsamada farsamaynta cilmiga, tayada si buuxda ayey ugu habboon tahay qaranka iyo heerka EU. Fujian Global Ocean Biotechnology Agaro-oligosaccharide waa nooca oligose oo leh shahaadada polymerization (DP) ee 2 ~ 12 ka dib hydrolysis, taas oo leh naftiis hooseeya, milanka sare, barta barafowga badan iyo dhaqdhaqaaqa sare.
Sida nooc ka mid ah polysaccharide-ka badda, agar caadi ah wuxuu leeyahay nafwaaji sare iyo milanka biyaha oo hooseeya, ma fududa in la dhuuqo, sidaas darteed aad ayey ugu xaddidan tahay dalabku. Laakiin agaro-oligosaccharise by nabaad-guur, waxay leedahay milmi wanaagsan oo biyo ah, waxay ku caawin kartaa jirka bini'aadamka inuu nuugo, kaliya maahan astaamaha guud ee oligosaccharides shaqeynaya, sidoo kale wuxuu leeyahay astaamo badan oo jireed oo aan lagu beddeli karin oligosaccharide, sida anti anti - kansar, anti-oksaydh, waxqabadka anti-bararka, iska caabin suuska iyo da'da istaarijka adkaysi, waa mid ka mid ah awooda ugu badan ee horumarinta ee oligosaccharides.
1. Saamaynta probiotics-ka mindhicirka
Fujian Global Ocean Agaro-oligosaccharides waxay kordhin kartaa bifidobacterium iyo lactobacillus, iyadoo si weyn u soo gaabinaysa xilliga la qabsiga koritaanka ee bakteeriyada waxtarka leh, kor u qaadista saameynta faafitaanka si dhakhso leh. Waxay leedahay iska caabin ku timaadda dheefshiidka by enzymes sare ee caloosha. Ka dib 24H ee daaweynta enzymes-ka caloosha sare, ku dhowaad dhammaan oligosaccharides ma saameynayo enzyme amylolytic. Ma dheef shiidi karo ama ma nuugi karo mareenka caloosha martida loo yahay ee martida loo yahay waxayna gaari kartaa xiidmaha waaweyn ee dhawrsan
2. Qoyaanka oo caddee
Fujian Global Ocean oligosaccharides waxay muujiyeen hygroscopicity wanaagsan waxayna leeyihiin xoogaa saameyn qoyaan ah.
Iyada oo leh waxtarkeeda gaarka ah ee ka hortagga howlaha monophenolase iyo diphenolase ee tyrosinase, waxay yareyn kartaa sameynta melanin ee maqaarka waxayna leedahay waxqabad wanaagsan oo xakameyn ah. Sidaa darteed, waxaa lagu dari karaa waxyaabaha la isku qurxiyo ee ka mid ah waxyaabaha caddeeya.
3.Anti-tumor iyo xoojinta difaaca jirka
Waxay joojisaa soo saarista unugyada kansarka iyadoo la joojinayo waxqabadka unugyada burooyinka sida kansarka caloosha, kansarka beerka iyo kansarka kaadiheysta, iyo iyadoo la joojinayo soo saarida prostagladin PGE2 iyo soo saarista dheecaanka burooyinka necrosis factor TNF-α, taas oo markaa ka hortageysa wax soo saarka unugyada kansarka.
4. Saamaynta Bakteeriyada
Maaddaama ay tahay wax ilaaliye dabiici ah oo wanaagsan, waxay leedahay saameyn xoog leh oo bakteeriyo ah waxayna si wax ku ool ah u yareyn kartaa soo saarista gumeysi bakteeriyada waxyeellada leh marka xoojintu gaarto 3.11%. Waa shey ilaaliya oo ka kooban maadada loo yaqaan 'agarobiose' kaas oo loo isticmaali karo in lagu ilaaliyo cuntada iyo cabitaanka mid cusub isla markaana si wax ku ool ah looga hortago midabkiisa isbeddelka, musuqmaasuqa iyo oksaydhka.
5. Saamaynta anti-bararka
Diyaarinta afka waxay kahortagi kartaa oo daweyn kartaa rheumatoid arthritis-ka daba-dheeraada, iyada oo aan lahayn cytotoxicity Waxay sidoo kale joojisaa soo saarista MAYA (xad-dhaafka nitric oxide wuxuu keenaa rheumatoid arthritis), oo loo isticmaali karo in looga hortago loona daweeyo cudurrada caabuqa ee joogtada ah sida arthritis.
1. Goob caafimaad
Daawooyinka Anticancer-ka: Enzymatic hydrolysis waxaa loo isticmaalay in lagu helo oligosaccharide. Kadib 15 maalmood oo tijaabo jiir ah, waxaa la ogaaday in heerka kahortaga 64mg / kg oligosaccharide ee unugyada kansarka uu ahaa 48.7%.
Daawada ilaalinta Beerka: Molikuyuul dhexdhexaadka agaro-oligosaccharide (ML) ayaa ilaalin kara waxqabadka SOD iyo GSH-PX, waxayna leeyihiin saameyn wanaagsan oo difaac ah oo ku saabsan dhaawaca beerka.
Daawada wadnaha iyo xididada: Agaro-oligosaccharide waxay saameyn weyn ku leedahay joojinta angiogenesis, taas oo badanaa keenta iyada oo kor loo qaadayo apoptosis ee unugyada xididada xididada xudunta iyo xanibaada wareegga unugyada ee wajiga S.
Daawooyinka kahortagga bararka: Kahortagga iyo daaweynta cudurrada daba-dheeraada ee caabuqa sida rheumatoid arthritis.
2. Cunto caafimaad
Waxyaabaha caanaha laga sameeyo: Agaro-oligosaccharide ma dheefshiido mareenka caloosha ee mindhicirka martida loo yahay, laakiin waxay si xushmad leh u kicin kartaa koritaanka bifidobacterium iyo lactobacillus sida laba jeermis oo faa'iido leh oo ku jira marinka mindhicirka martida loo yahay, iyo in la joojiyo koritaanka bakteeriyada halista ah sida enterococcus, sidaasna lagu wanaajiyo caafimaadka martida loo yahay. Waa nooc cusub oo prebiotics ah. Kobaca kor u qaadista saameynta agar-oligosaccharides ee probiotics ayaa ka fiicnaa tan pectin-oligosaccharides.
Dhowrista cuntada: Kaydinta
Agar-oligosaccharide waa nooc ka mid ah wax ilaaliyayaasha dabiiciga ah, kaas oo cuni kara cuntada iyo cabitaanka cusub isla markaana si wax ku ool ah uga hortagi kara midabkiisa isbeddelka, musuqmaasuqa iyo oksaydhka. Wakiilka Buuxinta: Agar-oligosaccharides waxaa loo isticmaali karaa in lagu buuxiyo oo lagu kala firdhiyo macaan badan sababta oo ah kuma burburin bakteeriyada xiidmaha waxayna leeyihiin astaamo ay oligosaccharides kale isbarbar dhigi karaan.
3. Quudinta shaqada
Qaddarka lagu daray wuxuu ahaa 0.05% ~ 10% ee miisaanka guud ee quudinta. Marka loo eego baaritaanka dhaqanka, difaaca jirka, iska caabinta cudurka, heerka koritaanka iyo heerka badbaadada ee kalluunka sida tilapia, haley sida South America haley cad, kalluun qolof leh iyo carsaanyo ayaa si weyn kor loogu qaaday marka la barbar dhigo kooxda xakamaynta. 'Agaro-oligosaccharide' waa wax kudarsan quudinta dabiiciga ah ee wanaagsan.
4. Is qurxinta
Waxay ka timaaddaa cawska dabiiciga ah ee saafiga ah, kaas oo aan sun lahayn oo ammaan ah in la isticmaalo. Waxay ku habboon tahay in lagu daro waxyaabo kale oo ah waxyaabo cusub oo la isku qurxiyo. Intaa waxaa sii dheer, oligosaccharide waa sonkor dhexdhexaad ah, oo aan lahayn tiro badan oo kooxo hydroxy ah oo ku jira unugyadeeda qaab-dhismeed, waxaana lagu dari karaa tiro aad u tiro badan oo maaddooyinka biyaha ah si ay u sameeyaan isku xidhka haydarojiin. Sidaa darteed, oligosaccharide wuxuu leeyahay hygroscopicity wanaagsan. Adoo xakameynaya ficil-celinta oksidheer ee tyrosinase, yaree sameynta melanin ee maqaarka oo caddeyso maqaarka.
Fiiro gaar ah: dhimaya u nuglaanshaha naftiisu waa 1.5% xal ka hooseeya 100 ℃.
Hore: Agar Labilaaba Isla Markiiba
Xiga: Semi sifeeyay Carrageenan